မြန်မာ ယူ-၁၉ နှင့် လာအို ယူ-၁၉ပွဲ ကို အမေစုလာရောက် အားပေးနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » မြန်မာ ယူ-၁၉ နှင့် လာအို ယူ-၁၉ပွဲ ကို အမေစုလာရောက် အားပေးနေ
မြန်မာ ယူ-၁၉ နှင့် လာအို ယူ-၁၉ပွဲ ကို အမေစုလာရောက် အားပေးနေ
Posted by နွယ်ပင် on Sep 14, 2011 in Entertainment, Myanma News, News | 13 comments
ယနေ့ (၁၄၊၉၊၁၁) တွင် ယှဉ်ပြိုင်သည့် မြန်မာ ယူ-၁၉ နှင့် လာအို ယူ-၁၉ တို့ဧ။် ဘောလုံးပွဲကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာရောက်ကြည့်ရှု အားပေးနေကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ သုဝဏ္ဏဘောလုံးကွင်း အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်ရှိ VIP အခန်းအတွင်းမှ အားပေးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ သြဂုတ်လအတွင်းကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် အမျိုးသားအဆင့် စီပွားရေးဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ခဲသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို မြန်မာနိုင်ငံ ဘောလုံးအဖွဲ့ ဥက္ကဌမှ မြန်မာနိုင်ငံမှ အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့် အာဆီယံ ယူ-၁၉ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲသို့ တက်ရောက်ကြည့်ရှုအားပေးရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိ၇ှိရပါသည်။
၁-၀ နဲ့ မြန်မာ နိုင်သွားတယ်..တဲ့။
အပေါ်သတင်းအတွက်ရော အောက်သတင်းအတွက်ရော bravo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
မြန်မာက နိုင်တော့နိုင်တယ် ။ အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားနှစ်ယောက် ထုတ်ခံလိုက်ရတယ် ။နောက်ပွဲ ကဂိုးတွေများများသွင်းနိုင်မှ ရလဒ်ကောင်းမှာလေ ။ ဆီမီးမှာ ယိုးဒယားနဲ့တွေ့ရင်တော့မလွယ်ဘူး ။ အုပ်စုတော့ချောင်တယ် ။ ဆီမီးကြောက်ရတယ် ။ ဆီမီးပွဲမှာလဲ အမေစုလာကြည့်မလားမသိဘူးနော် ။
မြန်မာနိုင်တယ်ဟေ့ဆိုရင် ရင်ထဲမှာအင်မတန် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာကြည်နှုးမိပါတယ်…တို့ဗမာတွေ အနိုင်ပျောက်နေတာလွန်ကြာနေပြီလေ…အမေစု ကိုယ်တိုင်လာရောက်အားပေးလို့ လူငယ်တွေပိုပြီးအားတက်စေတာလို့မြင်မိတယ်..(၉)ယောက်နဲ့(၁၁)ယောက်ကို အနိုင်ကန်သွားနိုင်တာ မြန်မာတွေရဲ့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ ယုံကြည်မူစိတ်ဓါတ်တွေ၊စုစည်းမူတွေ၊စည်းလုံးမူတွေကို ပြသလိုက်တာပဲလို့မြင်မိတယ်..
အမေစု ကလာအားပေးတော့ ဝမ်းသာပါတယ်။ဒါပေမယ့် အမေ့အတွက်အန္တရာယ်များပါတယ်။မသွားစေချင်ပါဘူး။
မြန်မာဘောလုံးပရိသတ်က.. ပြီးခဲ့တဲ့တခါက..ကမ္ဘာ့အလည်မှာ မြန်မာလူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာထိခိုက်ထားသလို..လုပ်ထားတော့.. ဒေါ်စုက.. သူကတာဝန်ယူပြတဲ့အနေနဲ့.. ထွက်လာတယ် ထင်မိတယ်..။
တော်တဲ့နိုင်ငံေ၇းသမားတွေ..လူထုနဲ့ကင်းကွာလေ့မရှိကြပါဘူး..။ အင်မတန် ကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ထင်မိတယ်..။
ဒီလိုလူ အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်မှာ.. ဂွတ်စစ်ဒဇင်လုပ်ချင်မိသား…။
ကောင်းလေစွ ကောင်းလေစွရယ်လို့ — ၀မ်းသာ —ညွှတ်နူး — ကြည်နူးမိကြောင်းပါ . . ..
သာဓု — သာဓု — သာဓု
အဲ တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်။ အမေစု – အစိုးရအဖွဲ့ထဲပါတော့မယ်ဆိုတာ (တကယ်ပါခွင့်ရခဲ့ရင်ရော )
ဒီအတိုင်းပဲ ပြည်သူ့ဘက်မှာ ရှိနေမှာလား။
အခွန် အခတိုးတဲ့ အစိုးရထဲမှာ အမေ ဘယ်နေရာကနေရပ်တည်မလဲ –
သားသိချင်စမ်းပါ့အမေ . . .
သဂျီးပြောမှပဲ ဒေါ်စု လုပ်ရပ်ရဲ့ အတိမ်အနက်ကို သိတော့တယ်။
မပူနဲ့၊ နောက်ဆို ဒေါ်စုကိုယ်တိုင် ဆင်းကန်တော့မှာ။ အကန်လွန်ပြီး ဗရုပ်ဗရက် လွှတ်တော်ကွင်းထဲ ရောက်သွားမှာတောင် စိုးမိတယ်။
လွှတ်တော်ထည်းမှာ မဲခွဲရင် ဗြောင်မဲထည့်ရမယ်ဆိုတာတွေ
အထူးသဖြင့် ဧရာဝတီမြစ်ဆုံဆယ်အကြောင်း အသံတွေထွက်နေတာကို….
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အင်္ဂျင်နီယာကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သွားသလိုတောင် ဗဟုသုတတွေရသွားမိတယ်
ပြောင်းလဲစေမယ့် လုပ်ဆောင်မှု့နည်းလမ်းကို နည်းနည်းလေးတောင် မတွေ့ရတာပါ
ဥပမာ ကန့်ကွက်ပါတယ် ဒါဘဲ
ဒီလိုပြောလို့ပြီးမှာလား ဘယ်လို အကျိုးသက်ရောက်အောင် လုပ်ရမယ်ဆိုတာ
ဟိုလိုဖြစ်သင့်ပါတယ် ဒီလိုဖြစ်သင့်ပါတယ် ထုံးစံအတိုင်းဘဲ
ဒါ့ကြောင့်လည်း ထုံးစံအတိုင်း သူတို့ဖြစ်အောင်လုပ်ကြမှာပါဘဲ
ဒီလိုလုပ်ရပ်ကိုပြလိုက်တာ သူတို့တွက် ဘယ်လိုထွက်ပေါက်ရသွားတယ်ဆိုတာ
ဒီအဖွားကြီးက စစ်အင်္ကျီနဲ့တွဲပြီးထိုင်နေတာကို
88 အရေးအခင်းမဖြစ်လို့ ကျုပ်သာ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး
သဂျီး အတွေးနဲ့ တူ လို့ ( + ) ပေးလိုက်တယ်။
ဲပြီးခဲ့ တဲ့ ပွဲတုံးက ပွဲ ရပ်နားရတဲ့ အထိ ဖြစ်ရပ် ကတော့ တကယ် ရှက်ဖို့ ကောင်းသလောက်၊
ခု ပွဲမှာ တော့ အားရကျေနပ်မိပါတယ်။
အမေစုကို အပြင်မှာတစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး မြင်ဖူးချင်စမ်းပါဘိ